यी पाच कारणले महिलाहरु गर्भवती हुन सक्दैनन् - ज्ञानविज्ञान
यी पाच कारणले महिलाहरु गर्भवती हुन सक्दैनन्
धेरै जसो महिलाहरु मोटाएर वा राम्रो आहार नपाएर उनीहरु बच्चा जन्माउँन असक्षम हुन्छन । डाइटिशियन लिजा एम शाहका अनुसार केही खानेकुरामा भएको ट्रान्स फ्याटका कारण महिलाले गर्भधारण गर्न समस्या हुने गर्दछ । यस्ता खानेकुरा आफ्नो डाइटमा समावेश गर्दा गर्भपतनको सम्भावना बढ्ने गर्दछ । त्यसकारण जो महिला गर्भवती हुन चाहन्छिन् उनले यी पाँच कुराबाट पूर्ण रुपमा टाढा हुनुपर्छ ।
यदि विवाहको एक वर्षपछि पनि गर्भाधान भइरहेको छैन भने डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस् । तौल धेरै हुने महिला गर्भवती हुन मुश्किल छ त्यसकारण आफ्नो तौल नियन्त्रण गर्नुहोस् । कुनै प्रकारको संक्रमण हुँदा तुरुन्त डाक्टरलाई देखाउनुहोस् । थुप्रै पटक संक्रमणको नकारात्मक असर पाठेघरमा पर्ने गर्दछ । यसले बाँझोपनको सम्भावना बढ्ने गर्दछ ।
यसमा पाइने पपाइनका कारण महिलाले गर्भधारण गर्न सक्दिनन् ।
२. चीनियाँ खानाः
यसमा मोनो सोडियम ग्लूटामेट हुन्छ । यसले गर्भपतनको सम्भावना बढ्छ ।
यसले पाठेघरको भित्ता खुम्चाउने गर्दछ जसका कारण गर्भधारण गर्न समस्या हुन्छ ।
४. गुलियो खानेकुराः
मिठाई, केकजस्ता खानेकुरामा हुने ट्रान्स फ्याटले गर्भधारणका लागि समस्या हुने गर्दछ ।
५. सफ्ट ड्रिङ्क्सः
यसमा पाइने सल्फाइट, क्याफिन र आर्टिफिशियल फूड कलर्सले गर्भपतन हुनसक्छ ।यस्ता तीन कुरा जसले गर्भाधानको सम्भावना बढाउँछः
यसमा फोलिक एसिड हुन्छ । यसले चाँडै गर्भाधान गराउन मद्दत गराउँछ ।
यसमा पाइने फोलिक एसिड, एलिसिनले शिशुको दिमागलाई राम्रोसँग विकास गराउन सहयोग गर्छ ।
यसमा ओमेगा थ्री फ्याटी एसिड हुन्छ । दैनिक एउटा अण्डा खाँदा गर्भाधान गर्न मद्दत मिल्दछ ।
Topics #गर्भवती #महिला
Don't Miss it बच्चाले ओछ्यानमा पिसाब नगर्नका लागि अपनानुस यी उपाय
Up Next यी कुरालाई बेवास्ता गरे, पुरुषको स्तनमा आउन सक्छ खतरनाक क्यान्सर
मिनिरल वाटर अथवा वोत्तल बन्द पानीले हुनसक्छ क्यान्सरको खतरा
शरीरलाई पानी नभई नहुने चिज हो । शरीरका लागि स्वच्छ पानी आवश्यक छ । तर, अहिले हामीले पिउने पानी दूषित…
उमेरको हिसाबमा थाहा पाउनुस्, कति सुत्ने
हाम्रो शरिरलाई जति कामको अवास्कता हुन्छ तेती नै आरामको पनि अवास्कता हुन्छ । मानिसले सधै काम गरेर मात्र पनि हुदैन आराम…
रुनु स्वस्थकका लागि फाइदाजनक
१. आखाँको दृश्य मजबुत बनाउँछः आँशु ल्याक्रीम ग्ल्याण्डबाट बन्ने गर्छ । आखाँमा यसले लुब्रिकेन्टको काम गर्छ । जब आँखामा डिहाइड्रेसन…
जान्नुहाेस् पानीका कारण लाग्ने राेगहरूबाट यसरी बच्न् सकिन्छ
पानी मानव शरीरका लागि अनिवार्य तत्व हो । शरीरमा यसको उपस्थित धेरै अर्थमा जीवनदाता मानिन्छ । त्यसैले जल नै जीवन…